Araka ny tondroin'ilay anarana, Big Data dia manondro fampahalalana marobe voangona nandritra ny fotoana iray ho an'ny tanjona manokana. Ny iray amin'ireo ohatra mahazatra indrindra dia ny mombamomba ny mpampiasa. Ny fisarahana hafa mifototra amin'ny demografika ho an'ny mpampiasa marobe mandritra ny fotoana iray dia azo antsoina hoe Big Data. Miaraka amin'ny habetsaky ny angona omena an'ity tranonkala manerantany isan'andro ity dia tsy azo resena ireo fahitana mety azo angonina avy amin'ity fampahalalana ity.
Tombontsoa tena izy amin'ny orinasa
Miaraka amin'ny fivoaran'ny aterineto ary ny teknolojian'ny vanim-potoana vaovao isan-karazany, ny angon-drakitra lehibe ary ny fampiharana azy dia mahita fitomboan'ny fangatahana. Manangona antontam-baovao maromaro ny orinasa rehefa mandeha ny fotoana, izay mety hanambara ny fironan'ny mpanjifa sy ny fifandraisany amin'ny famakafakana. Analytics ahafahana mitahiry an'io fitambarana vaovao io sy manodina azy mba handinihana bebe kokoa ny halalin'ny raharaham-barotra. Manampy amin’ny fanaraha-maso ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao raharaham-barotra ary maminavina vinavina mifototra amin'ny fitambaran'ny fandinihana.
Ny tanjaky ny angon-drakitra vaventy dia tsy miankina amin'ny habetsaky ny fampahalalana voangona manerana ny loharano, fa amin'ny fomba mahomby ampiasain'ny orinasa an'io fampahalalana io amin'ny famakafakana ireo fizotrany ankehitriny sy fampiharana amin'ny ho avy. Araka ny filazan'i Gartner dia maherin'ny 75% ireo orinasa mikasa ny hampiasa vola amin'izany. Noho izany, ny hevitra dia tsy ny famakafakana fironana ihany fa ny famakafakana azy haingana koa mba hitazomana ny fahaiza-manao. Miaraka amin'ny teknika mahery vaika misy, avo lenta ny zava-kanto amin'ny fitrandrahana ireo vaovao tiana. Dmandany ny habetsaky ny fampahalalana voatahiry, ny tombony azo namboarina ihany koa.
Hiatrehana ny fitaky ny fangatahana Big Data Analytics fa ny orinasa dia afaka misitraka amin'ny asany isan'andro, ny ekipanay ao NewGenApps dia manome antoka fa hijanona ho dingana mialoha hatrany amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fahaiza-manao ao an-trano mandritra ny fiaraha-miasa amin'ireo mpitarika ara-teknolojia ao anatin'izany Microsoft ary Google. Vitsivitsy amin'ireo fivoarantsika malaza no manantitrantitra ny: Ny rafitra fandefasana fianarana samirery mitambatra fianarana milina ary ny teknolojia angona lehibe
Modely mialoha mialoha momba ny fandrindrana ny fahaiza-manao namboarina Manao izay hahomby amin'ny fikirakirana ireo rafitra angon-drakitra ara-teknika mba hamahana ireo karazana angon-drakitra sy maro karazana
Eo amin'ny Tech Stack: Hadoop, Spark, Tableau, Microsoft Power BI, QlikView